English to Burmese translator specializing from spiritual to digital media
Local time: 17:16 SGT (GMT+8)
Services Translation, Interpreting, Transcription, Training, Desktop publishing, Vendor management
English to Burmese: Legal notice
Please be advised that you are in Violation of the Law and are subject to fines and criminal prosecution because you have not returned your Airport Security Badge.
YOU MUST IMMEDIATELY RETURN YOUR AIRPORT BADGE
to xxxx xxxx office located at
IF YOU RETURN YOUR AIRPORT BADGE WITHIN7DAYS WE WILL ISSUE $50 REWARD!!!
If you lost your Airport Badge you must pay the required fine of $50. The fine can be paid in cash or money order payable to City of xxxx office at the above address.
ANY EMPLOYMENT DOCUMENTS YOU MAY NEED IN THE FUTURE
( SUCH AS VERIFICATION OF EMPLOYMENT, xxx, CHECKS, ETC.) WON’T BE RELEASED UNTIL THE BADGE IS IN POSSESSION OF THE xxxxx.
If you do not return your Security Badge, we will be forced to report this to the Department of xxxx and the xxxx Police Department for appropriate action.
For your convenience we are including self-addressed and stamped envelope.
သင်သည် သင်၏ လေဆိပ်သက်သေခံကပ်ပြားကို ပြန်လည်အပ်နှံခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေတပ်ခံရခြင်း နှင့် 
တရာစွဲဆို ခံရခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
လေဆိပ်သက်သေခံကပ်ပြားကို အောက်ပါလိပ်စာသို့ ချက်ချင်းလာရောက်အပ်နှံရမည်။
xxxx xxxx office
အကယ်၍ လေဆိပ်သက်သေခံကပ်ပြား ကိုတစ်ပတ်အတွင်းလာရောက်အပ်နှံပါက သင့်ကို ၅၀ ဒေါ်လာဆုချမည်။
လေဆိပ်သက်သေခံကပ်ပြား ပျောက်ဆုံးပါက လိုအပ်သော ဒဏ်ငွေ ၅၀ ဒေါ်လာပေးဆောင်ရမည်။ ဒဏ်ငွေကို ငွေသားဖြင့်သော် လည်းကောင်း
xxxxx office အမည်တပ်ငွေလွှဲမိန့် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အထက်ပါလိပ်စာသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
သက်သေခံကပ်ပြား xxxx မြို့သို့မရောက်မချင်း သင့်အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်သော အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ (အလုပ်အကိုင်အထောက်အထား၊ xxx ၊ ချက်လက်မှတ်၊ စသည်တို့်) ကိုထုပ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
လေဆိပ်သက်သေခံကပ်ပြားကို လာရောက်အပ်နှံခြင်းမရှိပါက xxxx နှင့် xxxx ရဲဌာန တို့ကို သင့်တော်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုင်ကြားမည် ဖြစ်သည်။
သင်၏အဆင်ပြေမှုအတွက် လိပ်စာနှင့်တံဆိပ်ခေါင်းအသင့်ပါစာအိတ်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။
English to Burmese: Narration for Guided meditation Day 4
Happify Day4(v3)
Working Title: Beginning again, and again, and again…
Key words: Thought, planning, worry, listening, hearing, rising, falling
Andrew: Hello and welcome back. Today we're going to continue with our deepening of the mindfulness practice. So now, please go to your quiet place and settle in to your posture. Hopefully now you've started to get familiar with sitting and the practice.
Once we settle down, we can begin by either scanning the body or relax the mind and the body we being by bringing our attention to the rising and falling of the abdomen and, very importantly, we start to note it as we're paying attention. We want the noting to happen at the same time, so the rising and the noting of the rising should happen at the same time, and likewise with the falling. noting rising as the rising is happening, and we want to be noting the falling as the falling as happening. We don’t want to be anticipating the next breath or remembering the last breath. We want to be with the current breath, as it happens, now.
For some of us, as we begin this training, because it's new to us to be paying attention to our breath, sometimes we find that we're subtly controlling our breath. This can happen sometimes because controlling the breath makes it more obvious. Other times we may notice the manner of the breath…short, long, relaxed, tense, etc. But we are not supposed to be controlling the breath, because if we are, we'll find it very tiring and we'll become tired in the course of the practice.
You need to figure out and experiment how the noting works with your mind and your body. If you do find yourself controlling the breath, then simply in that moment of awareness, let it go and try to allow the next breath, rising or falling, to just happen naturally. We may notice many things along this journey and the noticing of them we shouldn't find problematic, although at times we may find it disappointing or frustrating. Over time we will come to haveamore mature and developed response to what we encounter in meditation and in our daily lives.
Of course, in the beginning we will have some reaction to what we notice, but then we want to use the instructions which emphasize recognizing what is present and then redirecting the attention back to the primary object, the breath. Recognizing and redirecting are really the first skills that we need to develop and we'll need to develop them many, many times.
In our culture, in the West, so many things are done for us, so many things happen automatically. We don’t find ourselves doing manual labor as much as we used to. In the mindfulness practice, moment to moment, we are attending to this mind as if it werealittle baby.
When you putalittle baby down to sit they may start to wiggle and crawl. Then it is our job as parents to patiently, gently, and kindly bring them back. And if they start to wander or crawl again, then we bring them back again. We don’t berate them, instead sometimes maybe we even chuckle. We try not to get upset with little babies, because this is what they do, and we need not get upset with our own untrained mind. Although we may be 20, 30, 40, 50, 60, 70, our minds have not been trained in this way, so they are just like toddlers.
As we start to discipline our mind (and it's not used to having control exerted over it in this way), it's not used to being accountable, and so it's going to fight and resistalittle bit sometimes. It might beabit wily sometimes. If we get upset at that it may lead us to further distraction, and the distractions will have gained the upper hand. t will have won, it will have bucked us like on trying to tameahorse, you get bucked off. Trying to tame your mind, your mind will try to distract your attention, guaranteed.
When it happens, rather than being disappointed or discouraged, we can almost laugh at recognizing the distracting nature of our mind and retrain it by redirecting going against the grain by redirecting our attention back to the next rising or falling and labeling it.
This is reallyapractice of paying attention, noticing what happens as we pay attention. The labeling is there to help us focus our attention. I'll be quiet and let you reconnect with the breath and experience what's happening in your mind and body right now.
So begin again by coming back to the breath. As we focus on the breath, as we becomealittle more familiar with the breath and the noting of the breath, we may start to notice more that we have thoughts or feelings or other sensations in our mind or in our body. In these early days of practice, we will just recognize them and then redirect our attention back to the breath.
Today, As we've becomealittle more familiar with the rising and the falling and we'll continue to do that in the coming weeks, we can start to practice by recognizing these other thoughts, feelings, sensations that may arise and labeling them as well. Inasense we're expanding our mindfulness vocabulary. If we find the mind is thinking, we can label it as thinking, thinking. If the mind is planning, we can label planning, planning. Maybe as we sit for longer, we feel certain aches or pains and we can label those as pain, pain, or aching, aching, or stiffness, stiffness…whatever the case may be.
Whatever our experience, we want to bring our attention to recognize and to bear on that experience. We should label it, notice what happens, and then afterafew labels, we want to try to can try to redirect the attention back to the rising and falling, noticing what happens as we do. When we redirect to the breath are we able to pay attention? Are we able to note the rising and falling, or does the attention get drawn back to the thought, the planning, the worry?
Whatever the case, there is no need to judge our experience as good or bad. That's not what we're doing. Mindfulness is about labeling it, recognizing it, givingalabel oranote to it. And then after noting itafew times, redirecting the attention to the rising and falling.
At this point, I should mention that if we find that there are sounds that we're listening to or hearing, we can simply note and label the sounds as listening, listening, or hearing, hearing. And, after these few notes, Then again, redirect our attention afterafew labels to the rising and the falling. In this way, the hearing or the listening can become an object of our meditation and notaproblem for our meditation.
For these last few minutes, now that we've allowed our attention to explore some newer turf or terrain, let's refocus, and makeaconcerted effort to sharpen our focus our attention on the rising and falling. For the last few minutes now, we're just going to note, either rising or falling. If our attention wanders, recognize it, but then let it go and redirect back to the rising and falling.
Again, bringing the attention back to the rising or falling, labeling it as rising, rising, falling, falling. After one or two more notes, of rising or falling and accompanied noting, you can choose to open your eyes.
So, congratulations on another day of practice. There are more than 60,000 seconds inaday and if we're able to note one note per second, that gives us 60,000 chances of noting our experience everyday. Of course, In the beginning, we may not going to be very skilled at this new practice. We only may getafew secondsaminute, but over time with repeated effort, we'll be able to start noting more continuously. Once we do that, the benefits will start to accrue.
Until our next session, may you be safe. Maybe you be happy. May you be healthy and may you look after yourself with ease.
Happify Day 4
သော့ချက်စာလုံးများ - အတွေး၊ စီစဉ်စဉ်းစားခြင်း၊ စိတ်ပူပန်မှု၊ နားထောင်ခြင်း၊ ကြားခြင်း၊ ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှု။
Andrew: မင်္ဂလာပါ၊ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  သတိကို နက်နဲ အားကောင်းအောင် ဆက်လက်ပြီး လေ့ကျင့်ကြမယ်။ အခုဆိတ်ငြိမ်တဲ့ နေရာလေးမှာ နေရာယူပြင်ဆင်ကြရအောင်။
အဆင်သင့်ပြင်ပြီးတာနဲ့ စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှော့ထားပြီး ဝမ်းဗိုက်ရဲ့  ဖောင်းမှု ပန်မှုပေါ်ကို အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဖောင်းမှုကလေးစလိုက်တာနဲ့ မှတ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပိန်မှုမှာလည်း ဒီလိုပဲ၊ ဖောင်းမှု ပန်မှု မပေါ်လာခင်လည်း ကြိုစောင့်စရာမလိုပါဘူး ပေါ်ပြီးမှလည်း စဉ်းစားနေဖို့ မဟုတ်ပါ။ အခုလက်ရှိ
ဖြစ်နေတဲ့ လေဝင်မှုပေါ်မှာ အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ က အဓိကပါ။
အစပိုင်းမှာ တချို့ က အသက်ရှူတာကို မသိမသာကလေး ထိန်း ထားတတ်တယ်၊ ထိန်းပြီးရှူရင်မောလာလိမ့်မယ်။
သင်တို့ မိမိရဲ့ လေရှူမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ် တို့ကို လက်တွေ့ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
ထိန်းချုပ်မှုတွေရှိရင် ထိန်းချုပ်မှုကို သိလိုက်ပြီး လျှော့ချလိုက်ပါ၊ သဘာဝအတိုင်း လေရှူမှု၊ ရှိုက်မှုဖြစ်ပါစေ။ အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာလျင်လည်း ၄င်းတို့ကိုသိလိုက်ပြီး ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် ကျော်လွှား နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ထားတိုးတက် ရင့်ကျက်လာပြီး တရားအားထုတ် တာကို နေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာ ကျင့်သုံးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာတော့ သင်တို့ဟာ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတွေကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ထဲမှာတုန့်ပြန်မှုတွေတွေ့လိမ့်မယ်၊ ဒါတွေကို သိလိုက်ပြီး မိမိရဲ့  ပင်တိုင် အာရုံပေါ်မှာ စိတ်ကိုပြန်ထားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုသိလိုက်ပြီး ပြန်ထားနိုင်တာ
ဟာ ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါ၊ ကြိမ်ဖန်များစွာလည်း ကြိုးစားပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင် အသုံးအဆောင်အားလုံးဟာ အလိုအလျောက် စနစ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ အထူးတလည်အားစိုက်ပြီး လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ နေရာမှာတော့
မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ကို ကလေးသဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်လေးဘက်သွားတဲ့အခါ စောင့်ကြည့် နေရတယ်။ မသင့်တဲ့နေရာရောက် သွားရင်ပြန်ချီပြီး ပြန်ထားပေးရတယ်။ ဘယ်တော့မှ မငြိုငြင်ဘူး။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ကြည့်ရတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့  စိတ်ကိုမပြုပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ လေး၊ ငါး၊ ခြောက်ဆယ် အသက်ကြီးလာတဲ့ အထိ စိတ်က ကလေးလိုဖြစ်နေဦးမှာပါ။
စိတ်ကို လေ့ကျင့်မှုပေးတာဟာ ထိန်းချုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါ။ မရ ရအောင်ချုပ်တည်းတာမျိုး၊ ခုခံတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။ တခါတလေ စိတ်ပျက်မှု တွန့်ဆုတ်မှု၊စိတ်ပျံ့ လွင့်မှုတွေကို ရှုမှတ်သိရင်နဲ့ပဲ စိတ်ရဲ့  အခြေအနေကို ပိုနားလည်လာပြီး စ်ိတ်ဟာပိုပြီးယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့လာတတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် စိတ်ပျံ့ လွင့်မှုတွေကလည်း အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်တတ်တယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ပျံ့ လွင့်မှုတွေကို စိတ်ပျက်ဖို့ မလိုပါ၊ သူတို့ကို သိလိုက်ရင်ပဲ ပျက်ရယ်ပြုလို့ရပါတယ်၊ သိမှတ်နေခြင်းဖြင့် နောက်ပေါ်လာမယ့် ဖောင်းမှု ၊ ပိန်မှု တွေ အပေါ်မှာ အာရုံပြန်စိုက်ရုံပါပဲ။
ယခုလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ရှုမှတ်ခြင်းနှင့် ဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်းသိခြင်းပါပဲ၊ အမည်တပ်ပြီးမှတ်ခြင်းဟာ အာရုံစိုက်မှုကို လွယ်ကူစေတယ်။ ယခုသင်တို့ရဲ့ 
အခုပြန်စကြမယ်။ လေဝင်လေထွက်မှုမှာ သင်တို့ပိုပြီးရင်းနှီးလာပြီး ဖြစ်မှာပါ။ သင်တို့ရဲ့  ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခံစားမှုများနဲ့၊ စိတ်မှာပေါ်လာတာတဲ့ အတွေးတွေကိုလည်း ပိုမို သတိထားနိုင်လာမှာပါ။ ဒီအစပိုင်းမှာတော့ အဲဒါတွေကို သိလိုက်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ကို လေဝင်လေထွက်မှာ ပြန်ထားနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ဖောင်းမှု ပိန်မှုကို ရှုမှတ်နိုင်တာနဲ့ အမျှ သင်တို့မှာ ဖြစ်နေတဲ့အတွေး၊ ခံစားမှု နဲ့ ထိသိမှုတွေကိုလည်း အမည်တပ်ပြီး မှတ်လို့ရလာမှာဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သတိနဲ့ချဲ့ ထွင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ စဉ်းစားရင် စဉ်းစားတယ်၊ စီစဉ်ရင် စီစဉ်တယ် လို့စိတ်မှာမှတ်မယ်။ ထိုင်မှတ်လို့ အနည်းငယ်ကြာလာရင် နာတာ၊ ကျင်တာ၊ ကိုက်တာ၊ တောင့်တာ တွေပေါ်လာမယ်။ ပေါ်လာရင် ပေါ်လာတဲ့ အတိုင်း “နာတယ်၊နာတယ်။ ကျင်တယ်၊ကျင်တယ်” လို့မှတ်ပါ။
ဘာပဲ ပေါ်လာ ပေါ်လာ၊ ပေါ်လာတာကို ရှုသိပါ။ အမည်တပ်ပြီး ပေါ်လာတာ ကို သတိပြုပါ။ ပြီးရင်ဖောင်းတာ၊ ပိန်တာ ကို ပြန်သွားပါ။ အဲဒီလိုပြန်သွားတဲ့အခါ စိတ်က တကယ်ပဲ ဖောင်းတာ၊ ပိန်တာ ကို ရောက်သလား? အတွေးနဲ့ တခြားအာရုံတွေပေါ်မှာပဲ ကျန်ရစ်သလား ဆိုတာကိုတော့ ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘယ်လိုအတွေ့ အကြုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတယ်၊ ဆိုးတယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခုလုပ်နေတာဟာ အကောင်းအဆိုး ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ မဟုတ်ပါ။ ဘာအာရုံပဲဖြစ်ဖြစ် အမည်တပ်မယ်၊ မှတ်မယ်၊ သိမယ်၊ ပြီးရင်ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှု ကို ပြန်လာမယ်။ ဒါဟာ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။
အသံတွေကို ကြားမယ်၊ နားထောင်မယ် ဆိုရင်လည်း ရိုးရိုးလေးပဲ “နားထောင်တယ်၊ နားထောင်တယ်။ ကြားတယ်၊ကြားတယ်။” လို့ပဲ မှတ်ပြီး ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှုကိုပဲ ပြန်လာရမှာဖြစ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က အသံတွေလည်း ယခုလို ရှုမှတ်မှု အာရုံအနေနဲ့ ရှုနိုင်ပြီဆိုရင် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်တော့ ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်တိုဟာ ရှုမှတ်မှုကို ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှု အပြင် ချဲ့ ထွင်ပြီးတော့ ရှုမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အာရုံတွေ ရှုမှတ်ပြီးရင် ဖောင်းမှု၊ ပိန်မှု ပေါ်မှာ စိတ်ကို ပြန်ထားနိုင်လာပါတယ်။
တစ်ရက် လေ့ကျင့်ခန်းအောင်မြင်ပါပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့ ယခုပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ရှုမှတ်မှုကို ကျွမ်းကျင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တစ်မိနစ်မှာ စက္ကန့် အနည်းငယ်ပဲ ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ လေ့ကျင့်ပေးရင်တော့ တောက်လျှောက်ရှုမှတ်နိုင်လာပါလိမ့််မယ်။ ရှုမှတ်နိုင်လာတာနဲ့ အကျိုးတရားတွေ စတင်ရရှိလာမှာပါ။
အားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိ ခန္ဓာဝန်ကို ကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
Translation education Bachelor's degree - Rangoon University, Yangon
Software Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Indesign, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Macromedia Freehand, Musescore, Pagemaker, Powerpoint, QuarkXPress
I amanative Burmese speaker with wide knowledge in
technical and cultural topics. I am fluent in both Burmese and English as I had
been working in Singapore for more than 20 years asadesign communication
specialist and piano teacher.
I gainedaDiploma in Piano teaching (ABRSM, UK), Graphic
Design Cert (Singapore), andascience degree in Yangon. I achieved strong
communication skills from my long-term work experience which included organizing
events, servicing clients, direct marketing and advertising.
The followings are the projects that I have done for
Burmese to English – Narration for Guided meditation video
on Youtube (my channel: https://www.youtube.com/user/MrDelight1788)
Burmese / Pali to English
Mentorship training program, course materials
for Youth Retreat, SMC, Singapore
for non-profit organizations (SMC, Singapore and Thi Han Sve Centre, Taunggyi)
Promotional materials for Tour business and hotels.
- Instant interpretation for talk and interviews
Research article - Benefits of Mindfulness
Mindfulness Matters (Training text for
Keywords: English to Burmese translation, technology, IT, market research, general translation, Legal translation, translation, graphic design, music, spiritual, religion, Burmese to English translation, advertising, medical translation, illustration, linguist, movie subtitle translation, Video narration